Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU Koonfur Afrika oo Marti Sharaf u Sameeyay HAAB/JWXO
Ururka OYSU Koonfur Afrika oo Marti Sharaf u Sameeyay HAAB/JWXO
Waxaa Caawa oo ay taariikhdu ku beegantahay 10/12/2012 marti sharaf u sameeyay Wafdigii uu hogaaminaayay Hogaanka Arimaha bulshada & Abaabulak Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadeniya (JWXO ) Mudane Sheikh Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane ) Ururka OYSU faraciisa Gobolka Eastern Cape ee ay rugtiisu tahay magaalada Port Elizabeth
Marti sharaftan oo ay soo bandhigeen maamulka Ururka OYSU ayaa ku soo hagaagay wakhti uu Gudoomiyuhu ku suganyahay wadanka South Africa islamarkaana uu ku gudajiro hawlaha halganka iyo Arimaha Abaabulka.Waxaa kaloo wehelinaayay waftigan xubno ka socday maamulka sere ee Jaaliyada Ogadeniya ee South Africa
Marti sharaftan ayaa ahayd marti sharaf aad u qiimo badnayd oo ay Dhalin yaradu ugu talagashay in ay isku bartaan waftiga uu horka caayay Gudoomiye Sheikh Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane ) & Ururka Midawga Dhalinyadada & Ardeyda Ogadeniya (OYSU) ee Magaalada Port Elizabeth
Hadaba Hogaanka HAAB ee Jabhadda wadaniga Xoreynta Ogadeniya (JWXO) Mudane Sheikh Maxamed (Diirane ) oo kormeer hawleed u jooga wadanka South Africa ayaa shirar waa weyn horey ugu soo qabtay magaa looyinka waa weyn ee wadankan
Gudoomiyuhu Isaga oo sii wata hawlihiisa ayaa waxa uu la kulmi doonaa maalmahan fooda inagu soo haya hadii Eebe idmo Bulshada noocyadeeda kaladuwan sida Odayaasha Aqoonyahanada Siyaasihiinta iyo Ururada bulshada ee ku nool wadanka South Africa gaar ahaan Gobolka Eastern Cape iyo nawaaxigiisa .
Xayi Yare/Port Elizabeth.
DADKII LA’ LAYNAYAY ERAYADOODII UGU DANBEEYAY EE TIIRAANYADA KA :
Gabdhaha iyo dhalinta la’ gumaadayay,waxa aan goob-joog u ahaa 12 dhalin yaro ah oo Reer-Dhagax-buur ah -wakhti 2 sano hadda laga joogo- in lagu eedeeyay in ay yihiin taageerayaal ONLF.
Ka dib Horjooge Shiihalaqe,Jarmali,amar ku bixiyay in la bireeyo goor habeen ah.
Markii biraynta lagu bi’laabay KHIIKH-dii ka baxaysay dhalinta la qali,wiil askari ah da’diisuna aad u yar-tahay oo istaaf u ahaa Shiihalaqe,Jarmali, ayaa ka gubtay KHIIKH-dii ragga la biraynayay.
Waxa aan xasuustaa ilaa hadda oo xusuustaydu soo cel-celisaa,hadalkii wiilka yar ee askariga ah ka yeedhay inta uu dib u booday ‘Tola’aye raggu ma xoolaa?’ Wiilkii inta uu is hayn waayay oo rasaas tac-shiirad ah furay ayuu dhanka wajigiisa u orday wiilkaas waxa uu ka mid ahaa inta uusan askariga noqon Carruurta Lyuu Police-ka jeclayd ee ku dhax-noolayd.
Subaxii markii Ciidankii,Hawaarinta,ka dhaqaaqay,waxa ay 7 saac ee duhurnimo ugu tageen wiilkii oo Rer reer-bAadiya ah lajooga ayuu ciidankii u yimid.
Shiihalaqe,Jarmali,(oo hadda xukuma Regiment-ga 17-aad ee dagan Degmada Birqod) waxa uu amar ku bixiyay in wiil-kii xabad lagu toogto,halkaasna qudha lagaga jaray.
DHAGAX-MADOW WAXA ISUGU YIMID annaga oo ah 3 Regimenti : ka 5-aad,9aad iyo ka 12-aad.
Shiihalaqe,Axmed Shuun,ayaa watay ciidanka hawl-galkan oo ku wajahnaa ONLF lagu sheegay in ay Bar-kulan ku leedahay Dar-dheer,balse la ma aanaan kulmin.Waxa naloo sheegay dhalin yaro taageero-yaal ONLF ah.
Dhalin yaradii aga’gaarkaas joogtay inta la wada uruuriyay,ayaa dhalintii lagu tuhmay in ay taageerayaal yihiin wiilal iyo gabdho ba gooni loo saaray.
Wiilashii inta la fadhiisiyay ayaa baas lagu furay.Gabdhihiina inta fiilo loo maray ayaa iyagana la laayay,waxanse aanan iloobaynin hadalkii ugu danbeeyay gabdhaha,gabadh ka mid ahayd oo tidhi:”Walaal,naguursada oo hana laynina,” Miyaydaan rag Soomaali ah ahayn?” marka aan xasuusto ilaa hadda kaligay baan ooyaa.
XILLIGII AY SOO XAROODEEN ITAXAADKU waxa dhuxun isugu yimid Regimentiga 5-aad waxana dhuxun horay u sii daganaa Regiment;ga 9aad oo aan ka mid ahaa.
Waxa is raacay 2-horin oo Regiment-ga 5-aad ah iyo 2-horin oo Regimentiga 9-aad ah.
Ciidanku waxa uu ku socday xog laga helay Jabhadii la odhan jiray,Al-Itixaad,Ajo-gudhay,in ay hub-3 daba-jeex (Bareen) 80 qori oo AK47 ah,iyo 2 Baasuuske oo mid yahay 2. ay ku aaseen buurta loo yaqaan Doonyow .
Annaga oo raadinayna hubkaas,ag-mar-marayna buurtaas ayaa askari naga mid ahaa arkay raad,annaga oo raad-kaas daba joogna.Marka aan soconay muddo 2-3 saacado ayaa waxa aan ku soo baxnay Jees geel badan oo meel dagan.
Horintii ku beegan-tay,Jeeskaas inta ay biyihii reerka yaalay ka boobeen ayay markii ba ka dhaqaaqeen.
Hadda ba markii aan soconay,100 tallaabo qiyaas ahaan ayaan u soo galay,ONLF badan oo hil-bo ku qadaynaysa.
Xabbadii mar-ka ay dhac-day wixii naga dhintay ka bacdi,ama ONLF ka shihiiday ba.Waxa dhanka bidix ka soo bax-day gabadh,gabadhii waa loo yeedhay,Shiihalaqe Axmed Shuun ayaa loo geeyay.
Markii uu waraystay gabadha,is la markii ba wuu gartay maadaa-ma uu ahaa Reer-Dhuxuneed,kuna dhashay dhuxun Shiihalaqa-ha laftigiisu .
Ka bacdi Shiihalaqe,Axmed Shuun,waxa uu amar ku bixiyay in gabadha Siil-ka xabad lagaga dhuf-to.
Sakaraad-kii gabadhu la qayl-yaysay ayaa askari Lyuu Police-ka mid ah ayaa sakaraadkii hal xabad ah oo uu madaxa kaga dhuftay ugu raaxeeyay gabadhii.
Gabdha Ninkeeduna waxa uu ku shahiiday is la goobtaas,ayaa Shiihalaqe,Axmed Shuun, isaga oo turaayaha ugu bishaaraynaya Abdi Ubbo ayuu yidhi ninkii hebel ahaa halkaas ayaan ku dilay Xaaskiisii uu bikir-jabsan waayayna xabad ayaan ugu bikir kabiyay.
Gumaadka Ciidanka Hawaarintu ku la kacayaan dadka waxa u dheer anshaxumada ay ku la kacayaan shacabkooda.